WHO oo sheegtay in 5malyan oo caruur ah ay halis ugu jiraan shuban biyood dalka Itoobiya – SBC
WHO oo sheegtay in 5malyan oo caruur ah ay halis ugu jiraan shuban biyood dalka Itoobiya
Addis Ababa:- Afhayeenka hay’adda caafimaadka adduunka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ninka lagu magcaabo Dhaariq Yasaarfiish ayaa u sheegay warfiyeenada in 8.8 malyan oo qof oo itoobiya ku nool la il daran yihiin malaariya halka shan malyan oo qof ay la il daran yihiin Shuban biyood.
Koleera ayaa sida ay ku fasirtay hay’adda WHO ah cudur ay sababto bakteeriyada ama jeermiska loo yaqaan vibrio cholera, oo sababa shuban biyood bulshada ku dhex faafa .
Mas’uul katirsan wasaaradda caafimaadka Ethiopia ayaa sheegay in shuban biyoodka u s aad ah fara kulul ugu hayo gobolada Cafar iyo Oromiya, xanuunkana uusan ku koobnayn xeryaha qaxootiyad.
Mas’uulka ayaa intaas ku daray WHO ay gaarsiisay Itoobiya qalab caafimaad oo deg deg ah islamarkaana ay ka caawinayso tababarka shaqaalaha si loo daweeyo cuni xumada iyo baaritaanka faafitaanka kiisaska cudurka.
Hay’dda caafimaadka aduunka ayaa sheegtay abaaraha saameeyey guud ahaan geeska Africa uu waxyeeleeyey 11 malyan oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya , Djibouti iyo Somalia uu sii kordhiyey faafitaanka cudurada la isku gudbiyo sida koleyraha iyo kaadi dhiiga.
Afhayeenka ayaa sheegay in soomaalida ka cararaysa abaaraha iyo dagaalada ee u baxsanaya dalka itoobiya ay gaarayaan qiyaastii kun iyo toddobo boqol oo qof maalin walba xilli inkabdan 4.5 malyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmooyin deg deg ah.